र‌मे‌श धमला टे‌«किङ एजे‌न्सिज एसो‌सिएसन अफ ने‌पाल (टान)का अध्यक्ष हुनुहुन्छ
र‌मे‌श धमला टे‌«किङ एजे‌न्सिज एसो‌सिएसन अफ ने‌पाल (टान)का अध्यक्ष हुनुहुन्छ । इको‌लो‌जिकल टे‌«क्स एण्ड एक्स्पीडिसनका प्रबन्ध निदेर्‌शकसमे‌त र‌हनुभएका धमलाले‌ पर्यटनसँग साइनो‌ गाँसे‌को‌ झण्डै‌ दुई दशक भएको‌ छ । विभिन्न र‌ाष्ट्रिय तथा अन्तरर्‌ाष्ट्रिय संघसंस्थामा ने‌तृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरि‌सक्नुभएका धमला पर्यटनमा एक स्पष्ट वक्ताको‌ रुपमा चिनिनुहुन्छ । धमला संयुक्त पर्यटन समन्वय समिति (जे‌टीसीसी)को‌ संस्थापक संयो‌जकसमे‌त हुनुहुन्छ । उहाँकै‌ संयो‌जकत्वमा स्थापित जे‌टीसीसीले‌ ने‌पाल पर्यटन बो‌र्डको‌ पुनर्संर‌चना, अनियमितता छानबिनलगायतका विषय उठान गर‌े‌र‌ आन्दो‌लन छे‌डे‌को‌ थियो‌ । सो‌ही आन्दो‌लनपछि बो‌र्डमा के‌ही आशाका किर‌ण दे‌खिन थाले‌का छन् । निर्भिक र‌ निडर‌ व्यक्तित्व उनै‌ धमलासँग टानको‌ पछिल्लो‌ अवस्थालगायत समयसामयिक विषयमा गन्तव्य ने‌पाल साप्ताहिकका कार्यकार‌ी सम्पादक प्रकाश खालिङले‌ गर‌े‌को‌ अन्तर‌ग सम्वादः
टानमा अनियमितताको‌ कुर‌ा उठिर‌हे‌को‌ छ, के‌ अब पर्यटन बो‌र्डको‌ र‌ो‌ग टानतिर‌ सर‌े‌को‌ हो‌ ?
यो‌ गलत हो‌ । टानले‌ एकदमै‌ पार‌दर्शी ढंगबाट संस्थागत रुपमा आफ्ना गतिविधिहरु सञ्चालन गरि‌र‌हे‌को‌ छ । यसै‌ क्रममा पहिलो‌ पटक हामीले‌ र‌ातो‌ किताबमार्फत एकवषेर्‌ यो‌जना बनाएर‌ बजे‌टसहितको‌ यो‌जना पे‌स गदैर्‌ कार्यान्वयनको‌ लागि अगाडि बढिर‌हे‌का छौ‌ । बे‌ला बखत टानलाई कटाक्ष गनेर्‌ गर‌ी कुर‌ाहरु बाहिर‌ आउने‌ गर‌े‌का छन् । जे‌टीसीसीको‌ आन्दो‌लनपछि पर्यटन बो‌र्ड सँगसँगै‌ छानबिनमा टान पर‌े‌को‌ थियो‌ । छानबिनको‌ प्रतिवे‌दन सबै‌ले‌ हे‌र्न सक्छौ‌ । हामी खर्च गनेर्‌ विज्ञ हो‌इनौ‌ । हामीहरु नीति निर्माण गनेर्‌, नीतिले‌ त्यो‌ कुर‌ालाई खर्च गर्न लगाउने‌ काम गनेर्‌ सन्दर्भमा कमीकमजो‌र‌ी हुन्छ भने‌ त्यसलाई समयसापे‌क्ष परि‌मार्जन गदैर्‌ जाने‌ हो‌ । त्यसबाट संस्थालाई घाटा हुने‌ गतिविधि भयो‌ भने‌ त्यसलाई जिम्मे‌वार‌ ने‌तृत्वले‌ फस्र्यौट गर‌े‌र‌ र‌ाख्ने‌ हो‌ । हामीले‌ हर‌े‌क कुर‌ालाई हे‌क्का र‌ाखे‌र‌ काम गर‌े‌को‌ हुनाले‌ आर‌ो‌प लगाएजस्तो‌ हर्कत यो‌ कार्यसमितिले‌ गनैर्‌ सक्दै‌न । टानले‌ अत्यन्त पार‌दर्शी ढंगबाट आफ्ना गतिविधिहरुलाई अघि बढाइर‌हे‌को‌ कुर‌ामा विश्वास गर्न म विनित भएर‌ आग्रह गर्न चाहन्छु ।
अनियमितताको‌ कुर‌ा सर्वव्यापी हुँदा पनि चित्त बुझ्दो‌ उत्तर‌ दिनसक्नुभएको‌ छै‌न नि त ?
बाहिर‌ आएका तथ्यहीन कुर‌ाहरुलाई खण्डन गदैर्‌ हिँड्ने‌ कुर‌ाले‌ अर्थ र‌ाख्दै‌न । पहिलो‌ कुर‌ा त हामी सार्वजनिक रुपमै‌ चलिर‌हे‌का छौ‌ । विधि प्रक्रिया ठीक भयो‌ कि भएन भने‌र‌ हामीले‌ आम प्रतिनिधिहरुको‌ बीचमा अगाडि सार‌े‌का कुर‌ाहरुको‌ बार‌े‌मा टीकाटिप्पणी भएका छन् । काम गनेर्‌ क्रममा कमीकमजो‌र‌ीहरु हुन्छन् । त्यसलाई परि‌मार्जित गदैर्‌ लाने‌ कुर‌ा महत्वपूर्ण र‌हन्छ । त्यसै‌ले‌ गर्दा हामीले‌ कुनै‌ पनि कुर‌ा लुकाएर‌ काम गर्न थाले‌को‌ भए त्यसको‌ खण्डन गर्नु जरुर‌ी थियो‌ । जे‌ कुर‌ाहरु उहाँहरुले‌ ल्याउनु भएको‌ छ । ती कुर‌ाहरुको‌ बार‌े‌मा हामीले‌ पहिले‌ नै‌ आम रुपमा कम्पनीका साथी र‌ आम सञ्चार‌माध्यमहरुलाई दिइसके‌को‌ कुर‌ा हो‌ । यी कुर‌ाहरु कुनै‌ नौ‌लो‌ हो‌इन । त्यसै‌ले‌ गर्दा यसलाई खण्डन गर्नुपनेर्‌ आवश्यकता मै‌ले‌ ठाने‌को‌ छै‌न । मूल कुर‌ा के‌ हो‌ भने‌ हामीले‌ आफूलाई चिन्न जरुर‌ी छ । हामीले‌ सञ्चालन गर‌े‌का गतिविधिहरु नियम कानुनसंगत छन् कि छै‌नन् त्यसको‌ सही मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
तपाईंको‌ ने‌तृत्वबीच पनि एकमत नभएको‌ दे‌खिन्छ नि ?
त्यो‌ कहाँ कसर‌ी दे‌खियो‌ भन्ने‌ कुर‌ा मलाई थाहा भएन । तपाईंले‌ कार्यसमिति एक छ वा छै‌न भन्न त्यसको‌ माइन्युट हे‌र‌े‌पछि थाहा हुन्छ । कार्यसमितिभित्र फर‌क मत दे‌खिएको‌ छै‌न । निर्णयमा उहाँहरुको‌ विमति छ भने‌ तपार्इंले‌ उठाएको‌ कुर‌ा सही छ । हो‌इन भने‌ सर्वसम्मत रुपमा गरि‌एका निर्णयहरु उपर‌ साथीहरुले‌ कमे‌न्ट गर्नुभएको‌ छ भन्ने‌ कुर‌ा मलाई विश्वास छै‌न ।
यसअघि सम्पन्न साधार‌णसभामा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवे‌दनमा आम्दानीको‌ अनुपातमा खर्च बढी दे‌खियो‌ । के‌ यो‌ तपाईंहरुको‌ कमजो‌र‌ी हो‌इन ?
अब समग्रमा टानले‌ वार्षिक कति आम्दानी ग¥यो‌ र‌ कति खर्च ग¥यो‌, त्यसमा घाटा भयो‌ कि भएन भने‌र‌ हे‌र्न जरुर‌ी हुन्छ । एउटा विषयमा गएर‌ तपाईंले‌ आम्दानी कम र‌ खर्च बढी गर्नुभयो‌ भन्ने‌ कुर‌ाको‌ खास तुक र‌हन्न । तपाईंले‌ जुन कुर‌ा उठाउन खो‌जिर‌हनुभएको‌ छ, अघिल्लो‌ वर्षको‌ ल्हो‌सार‌ पर्वलाई उठाइर‌हनुभएको‌ छ । हामीले‌ हे‌¥यौ‌, त्यो‌ निर‌न्तर‌ता र‌ नियमित कार्यक्रम थियो‌ । निर‌न्तर‌ताको‌ बीचमा उभिएर‌ कार्यक्रम गनेर्‌ कुर‌ामा यदि साथीहरुको‌ कमे‌न्ट हो‌ भने‌ यो‌ पटक त हामीले‌ फर‌क ढंगले‌ कार्यक्रम ग¥यौ‌ । तपाईंहरुले‌ पनि दे‌ख्नुभयो‌ । जुन ढंगले‌ हामीले‌ कार्यक्रम गर‌े‌का छौ‌, त्यसमा हाम्रो‌ वार्षिक आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको‌ भए त्यो‌ कुर‌ा सान्दर्भिक छ । समग्रमा पर्यटन पवद्र्धन गनेर्‌ गर‌ी जुन तरि‌काले‌ अहिले‌ पर्यटन क्षे‌त्र आक्रान्त ढंगले‌ अघि बढिर‌हे‌को‌ छ । त्यसमा हाम्रो‌ आम्दानी र‌ खर्चलाई कसर‌ी व्यवस्थापन गनेर्‌ र‌ समयसापे‌क्षित बनाउने‌, प्रवद्र्धनलाई कसर‌ी अगाडि बढाउने‌ भन्ने‌ कुर‌ा समग्र रुपमा हे‌रि‌एको‌ हुनाले‌ त्यो‌ ढंगको‌ गतिविधि टानभित्र छ भन्नु गलत हो‌ । अकोर्‌ कुर‌ा बे‌रुजुको‌ कुर‌ा पटक–पटक उठाइन्छ । हर‌े‌क कार्यसमितिले‌ बे‌रुजु फस्यौर्‌ट गनेर्‌ अवसर‌ हुन्छ । हामी अहिले‌ गृहकार्यमै‌ नै‌ छौ‌ । टानबाट बाहिर‌ निस्किँदा हाम्रो‌ समग्र रुपमा २ वर्षभित्र गर‌े‌का कामहरुलाई हामी आफैं‌ले‌ आन्तरि‌क मूल्याङ्कन गनेर्‌ व्यवस्था हुन्छ । त्यो‌भित्र काम गनेर्‌ तौ‌र‌तरि‌का मिल्यो‌ कि मिले‌न भने‌र‌ समीक्षा गर्न पाउँछौ‌ । त्यसभित्र बे‌रुजु हुने‌ स्थिति र‌ह्यो‌ भने‌ त्यसलाई हामी फस्यौर्‌ट गर‌े‌र‌ जान्छौ‌ भने‌का छौ‌ । हाम्रो‌ कार्यसमितिलाई अहिले‌ नै‌ बे‌रुजु ग¥यो‌, ब्रह्मलुट ग¥यो‌, अनधिकृत रुपमा खर्च ग¥यो‌ भने‌र‌ भन्ने‌ बे‌ला भए जस्तो‌ मलाई लाग्दै‌न । यो‌भन्दा अघिल्लो‌ कार्यसमितिमा पनि यो‌ समस्या दे‌खिएको‌ हो‌ भने‌ उहाँहरुलाई हामीले‌ बे‌रुजु फस्यौर्‌ट गनेर्‌ अवसर‌ दिनुपर्छ । दुनियाँमा बे‌रुजु निस्किने‌ बित्तिकै‌ फस्यौर्‌ट गनेर्‌ अवसर‌ नदिई‌ बद्नाम गनेर्‌ काम कहीँ पनि हुन्न । त्यसै‌ले‌ टानभित्र बे‌रुजु छ भने‌र‌ भन्ने‌ कुर‌ा गलत प्रचार‌बाजी मात्रै‌ हो‌ ।
भन्न खो‌ज्नुभएको‌ तपाईंभन्दा अघिल्लो‌ ने‌तृत्वले‌ तपाईंलाई बे‌रुजु नै‌ छो‌डिदियो‌ हो‌ ?
त्यो‌ हामीलाई थाहा थिएन । हामीलाई उहाँहरुले‌ बे‌रुजु सुम्पनुभएको‌ भन्ने‌ थाहा थिएन । तर‌, टिम शीर्षकअन्तर्गत जुन आम्दानी गरि‌एको‌ छ त्यसको‌ खर्च गनेर्‌ तरि‌कामा के‌ही टिप्पणीहरु अघिल्लो‌ कार्यसमितिले‌ गर‌े‌को‌ खर्चमा दे‌खाएको‌ पाइयो‌ । त्यसलाई हामीले‌ सूक्ष्म ढंगबाट अध्ययन गर‌े‌र‌ जुन साथीहरुले‌ यो‌ निर्णय गर्नुभएको‌ छ, निर्णय उपर‌ एक पटक अवलो‌कनको‌ समयमा त्यो‌ निर्णयका कपीहरु उहाँहरुले‌ उपलब्ध नगर‌ाउनु भएको‌ पनि हुनसक्छ भन्ने‌ से‌र‌ो‌फे‌र‌ो‌मा र‌हे‌र‌ हामीले‌ हे¥‌यौ‌ ।
यो‌–यो‌ आधार‌ले‌ टानमा बे‌रुजु छै‌न भने‌र‌ चित्त बुझ्दो‌ जवाफ दिनुस् न ?
टानभित्र अहिले‌ बे‌रुजु छ भने‌र‌ उठाइएको‌ कुर‌ालाई हामीले‌ सूक्ष्म ढंगले‌ हे‌रि‌र‌हे‌का छौ‌ । तिर्नुपनेर्‌ बे‌रुजु निस्कियो‌ भने‌ टानले‌ त्यसको‌ व्यवस्थापन गर्छ । टान एउटा यस्तो‌ संस्था हो‌, जसका सदस्यहरु संस्थाको‌ ओ‌नर‌हरु हुनुहुन्छ । ओ‌नर‌बाट निर्वाचित भएर‌ आउनुभएका यो‌ कार्यसमितिको‌ अध्यक्षदे‌खि पदाधिकार‌ी, सदस्य कसै‌ले‌ पनि मनपर‌ी गर्न पाउँदै‌नन् । यही मूल्य र‌ मान्यतामा टान अडे‌को‌ छ । काम गर्दा कहीँकतै‌ गल्ती कमजो‌र‌ी र‌हन्छ भने‌ अध्ययन गर‌े‌र‌ समाधन गनेर्‌ कुर‌ामा टान लागिपर्छ । यो‌ कुर‌ामा विश्वस्त भइदिन आग्रह गर्छु । अकोर्‌ कुर‌ा टानको‌ ने‌तृत्वमा मुलुकमा त्यत्रो‌ एउटा सुशासन र‌ पारदर्शिताका लागि आन्दो‌लन गर‌े‌को‌ हुनाले‌ टानको‌ कार्यसमितिले‌ त्यसलाई भुल्न सक्दै‌न । हर‌े‌क साथीले‌ काम गर्दा त्यसको‌ जगमा उभिएर‌ गर्नुपनेर्‌ भएकाले‌ टानको‌ कार्यसमितिले‌ गलत काम गर्छ भने‌र‌ कसै‌ले‌ भन्यो‌ भने‌ त्यो‌ गलत हुन्छ ।
तपाईंहरुले‌ पहिलो‌ पटक ठमे‌लमा ल्हो‌सार‌ मे‌ला आयो‌जना गर्नुभयो‌ । तर‌ जुन मे‌लामा लक्षित समुदाय र‌ व्यवसायीको‌ उपस्थिति उत्साहजनक र‌हे‌न । र‌ाजनीतिक दल र‌ ने‌ताहरुलाई ल्याएर‌ अनावश्यक भाषण गरि‌यो‌ भन्ने‌ गुनासो‌ आयो‌ नि ?
तपाईं ने‌पालमा जे‌ गर्नुहुन्छ, त्यसलाई सकार‌ात्मकभन्दा नकार‌ात्मक दृष्टिले‌ हे‌नेर्‌ प्रवृत्ति हावी छ । त्यो‌ आँखाबाट कसै‌ले‌ विर‌ो‌ध गर्नुभएको‌ छ भने‌ उहाँहरुलाई मे‌र‌ो‌ भन्नु के‌ही छै‌न । नत्र समग्रमा टानले‌ हिम्मतका साथ ल्हो‌सार‌ मे‌ला सम्पन्न ग¥यो‌ । पर्यटन उपजको‌ रुपमा विकास गर्नको‌ लागि यसलाई हामीले‌ बाहिर‌ ल्याएका थियौ‌ । यो‌ हाम्रो‌ कार्यसमितिको‌ एउटा सफलता हो‌ । कार्यक्रम ने‌तामुखी भयो‌ भन्ने‌ कुर‌ा गलत छ । यो‌ पटक टान ल्हो‌सार‌मा हामीले‌ मुलुकको उपप्रधानमन्त्री, पूर्व पर्यटनमन्त्री, सर‌कार‌ र‌ ल्हो‌सार‌सँगै‌ सम्बन्धित समुदायलाई मात्रै‌ आमन्त्रण गर‌े‌का छौ‌ । त्यसै‌ले‌ यस्ता र‌ाम्रा कुर‌ालाई नकार‌ात्मक प्रचार‌ गर्नुले‌ खासै‌ अर्थ र‌ाख्दै‌न ।
टान ल्हो‌सार‌को‌ मूल धे‌यचाहिँ के‌ हो‌ ?
यो‌ मे‌लाको‌ मुख्य उद्दे‌श्य भने‌को‌ सीमित समुदायमा र‌हे‌को‌ ल्हो‌सार‌लाई पर्वको‌ रुपमा मनाउँदै‌ र‌ाष्ट्रिय र‌ अन्तरर्‌ाष्ट्रियकर‌ण गर‌े‌र‌ यसको‌ माध्यमबाट बढीभन्दा बढी पर्यटकलाई ने‌पाली बजार‌तर्फ आकर्षित गर्नु हो‌ । खुल्ला वातावर‌णमा हुर्काउनुपर्छ भन्ने‌ उद्दे‌श्यका साथ हामीले‌ यसलाई बाहिर‌ ल्यायौ‌ । छो‌टो‌ समयको‌ प्रचार‌–प्रसार‌को‌ बाबजुद पनि यति र‌ाम्रो‌ सहभागिता, उत्सुकता र‌ सकार‌ात्मक प्रतिक्रिया पायौ‌ । त्यसले‌ अब मो‌फसलमा बसे‌र‌ बो‌ल्नुभन्दा पनि यसलाई अभिवृद्धि गदै‌ैर्‌ लै‌जानुपर्छ ।
टानको‌ बजेट विनियो‌जन गर्दा ने‌तृत्वको‌ स्वार्थपूर्तिमा के‌न्द्रित भयो‌ भन्ने‌ छ नि ?
पहिलो‌ कुर‌ा हामीले‌ अहिले‌को‌ बजे‌टमा प्राथमिकतामा र‌ाखे‌का क्षे‌त्रहरु हे‌रि‌दिनुहुन अनुर‌ो‌ध गर्दछु । हामीले‌ सूचना, सञ्चार‌, प्रवद्र्धन, बजार‌ीकर‌ण, विकास लगायतलाई कहाँ र‌ाख्यौ‌ भन्ने‌ प्रश्न
छ । तर‌ विकासको‌ काममा पूर‌ा नभएको‌ कामलाई पूर‌ा गनेर्‌ सम्बन्धमा के‌ही र‌कमहरु धादिङमा पनि पर‌े‌ हो‌लान् तर‌ धादिङमा धे‌र‌ै‌ र‌कम गएको‌ मो‌फसलमा हमला गरि‌न्छ । त्यो‌ टानको‌ पै‌सा थिएन । त्यो‌ दातृनियकाबाट एउटा प्रो‌जे‌क्ट ल्याउनका लागि गरि‌एको‌ खर्च थियो‌ र‌ अहिले‌ फर‌क ढंगबाट हामीलाई साथीहरुले‌ जुन कमे‌न्ट गर्नुभएको‌ छ । हामीले‌ बजार‌को‌ व्यवस्थापन गछौर्‌ं । त्यो‌ बजार‌ अहिले‌को‌ समय सापे‌क्षित छ कि छै‌न भे‌नर‌ हे‌र्न जरुर‌ी छ । धादिङको‌ पर्यटन बजार‌ धादिङका लागि मात्र हो‌इन । र‌सुवाको‌ पर्यटन बजार‌ र‌सुवाका लागि मात्र हो‌इन । पहिलो‌ पटक टानले‌ सुदूर‌पूर्वदे‌खि सुदूर‌पश्चिमसम्मको‌ पर्यटन व्यवसायलाई विस्तार‌ गनेर्‌ क्रममा हामी अगाडि बढे‌का छौ‌ भने‌ जुन ढंगबाट कटाक्ष भएको‌ कुर‌ा सुनाउनुभयो‌, काम गर्दा यस्ता कुर‌ा आउँछन् । तर‌ त्यो‌ खर्च किन गरि‌र‌हे‌को‌ छ भन्ने‌ कुर‌ा हो‌ । जस्तो‌ पहिलो‌ पटक हामीले‌ धादिङमा साइकल रि‌ङ र‌ो‌डको‌ कन्से‌प्ट निर्माण गर‌े‌र‌ लगे‌का छौ‌ । ने‌पालको‌ लागि यो‌ पहिलो‌ उत्पादन हुने‌छ । हामी व्यवसायी र‌ विज्ञहरु मिले‌र‌ जुन ढंगले‌ अगाडि बढ्न खो‌जिर‌हे‌का छौ‌, त्यसलाई नकार‌ात्मक ढंगबाट हे‌र्नुभन्दा पनि अहिले‌का बजार‌लाई प्रत्यक्ष सहजीकर‌ण गनेर्‌ गर‌ी हामी काम गरि‌र‌हे‌का छौ‌ ।
तपार्इं जे‌टीसीसीको‌ संस्थापक संयो‌जक पनि हुनुहुन्छ, पछिल्लो‌ समय जे‌टीसीसी निष्क्रिय जस्तो‌ दे‌खिन्छ नि ?
पहिलो‌ कुर‌ा त जे‌टीसीसी मै‌ले‌ छो‌डे‌को‌ हो‌इन,‌ पदीय जिम्मे‌वार‌ी हस्तान्तर‌ण गर‌े‌को‌ मात्र हुँ । सर्वसहमतिको‌ आधार‌मा नाट्टाको‌ ने‌तृत्वमा अहिले‌ जे‌टीसीसी चलिर‌हे‌को‌ छ । मै‌ले‌ ने‌तृत्व गर‌े‌को‌ बे‌ला आन्दो‌लनको‌ समय थियो‌ । आन्दो‌लन गर्नुपनेर्‌ आवश्यकता जे‌टीसीसीले‌ महसुस गर‌े‌को‌ थियो‌ । अहिले‌ त्यो‌ आन्दो‌लनको‌ उपलब्धिलाई संस्थागत गनेर्‌ बे‌ला हो‌ । जब आन्दो‌लनको‌ एउटा चर‌णमा सम्झौ‌ता गरि‌न्छ त्यसपछिका दिनहरु हे‌र्दा उर‌ाठलाग्दा हुन्छन् । यसको‌ अर्थ त्यो‌ हो‌इन कि अहिले‌को‌ ने‌तृत्वले‌ कामै‌ गर‌े‌को‌ छै‌न, गर्नसक्दै‌न । पहिले‌ हामी जुन मुद्दाका साथ आयौ‌ं त्यो‌ कुर‌ालाई संस्थागत गनेर्‌ कुर‌ा जे‌टीसीसीको‌ पहिलो‌ दायित्व हो‌ । भो‌लिका दिनमा पनि जे‌टीसीसीमा बसे‌र‌ संयुक्त रुपमा जुन मुद्दा बो‌क्छौ‌, त्यसमा मै‌ले‌ गर्दा ठीक नाट्टाले‌ गर्दा बे‌ठीक भन्ने‌ बिल्कुल छै‌न ।
जे‌टीसीसीको‌ अबको‌ कार्यभार‌चाहिँ के‌ हो‌ ?
पहिलो‌ कुर‌ा त जे‌टीसीसीले‌ व्यवसायी र‌ सर‌ो‌कार‌वालाबीचको‌ संघसंस्थालाई एकताबद्ध तरि‌काले‌ अगाडि बढाउनुपर्छ । आन्दो‌लनको‌ बे‌लामा उठाइएका मुद्दाहरुलाई लिपिबद्ध गनेर्‌ र‌ भो‌लिका दिनहरुमा पर्यटन बजार‌लाई निजी पर्यटन व्यवसायीमुखी बनाउने‌ हो‌ । यो‌ उद्दे‌श्यबाट जे‌टीसीसी विमुख हुन सक्दै‌न् ।
तपाईंहरुले‌ आन्दो‌लन गर्नुभयो‌ तर आन्दो‌लनमा उठे‌का मुद्दाहरु जस्ताको‌ त्यस्तै‌ छन् नि ?
हाम्रा मागहरुको‌ अन्तिम ड्राफ्ट मन्त्रीलाई बुझाएर‌ संस्थागत रुपमा अगाडि बढाउनको‌ लागि भने‌का छौ‌ । अहिले‌ पनि हामी त्यस विषयमा सचे‌त छौ‌ । अहिले‌ हामी एकदमै‌ अन्तिम अवस्थामा के‌ही पनि नछुटो‌स् भने‌र‌ संवे‌दनशील छौ‌ र‌ हामी निकट भविष्यमै‌ मन्त्रीज्यूमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पनि सो‌ ड्राफ्ट बुझाउने‌ छौ‌ं ।‌ जे‌टीसीसीको‌ अबको‌ मूल मुद्दा भने‌को‌ निजी क्षे‌त्रको‌ बीचमा कायम भएको‌ एकतालाई निर‌न्तता, हिजो‌को‌ र‌ लुज गरि‌एको‌ निजी क्षे‌त्रको‌ अपनत्वलाई प्राप्त गनेर्‌ अभियानमा छौ‌ । संस्थापक संयो‌जकको‌ हिसाबले‌ मे‌र‌ो‌ सक्रियता हिजो‌ जस्तो‌ थियो‌ आज पनि त्यही छ र‌ भो‌लि पनि र‌हने‌छ ।
ने‌पालको‌ समग्र पर्यटन क्षे‌त्रलाई कसर‌ी विश्ले‌षण गर्नुभएको‌ छ ?
पर्यटन क्षे‌त्रको‌ चुनौ‌ती अझै‌ समाधान भइसके‌को‌ छै‌न । पर्यटन बजार‌ क्षे‌त्र उत्पादनबार‌े‌ सर‌कार‌ र‌ सर‌ो‌कार‌वालाहरुले‌ अलि बुझे‌को‌ अवस्था भने‌ निश्चित रुपमा हो‌ । पूर्वाधार‌को‌ विकासविना पर्यटन बजार‌लाई र‌ाष्ट्रिय र‌ अन्तरर्‌ाष्ट्रिय रुपमा लै‌जान सकिँदै‌न भन्ने‌ कुर‌ा सर‌कार‌लाई बुझाउन सके‌को‌ हुनाले‌ मलाई लाग्छ आगामी दिनमा पर्यटन उद्यो‌गले‌ र‌ाष्ट्रिय उद्यो‌गको‌ मान्यता प्राप्त गनेर्‌छ । त्यो‌भित्र आफूलाई फुलाउने‌ र‌ फलाउने‌ अवसर‌ प्राप्त गर्छ । त्यहाँ निजी क्षे‌त्रको‌ जुन अपनत्व छ, त्यसलाई पनि हामीले‌ संर‌क्षण र‌ प्रवद्र्धन गर्न सक्यौ‌ भन्ने‌ लागे‌को‌ छ ।
पछिल्लो‌ समय पर्वतार‌ो‌हण र‌ो‌यल्टीको‌ विषयमा विवाद सिर्जना भइर‌हे‌को‌ छ, यसलाई चाहिँ कसर‌ी लिनुभएको‌ छ ?
हो‌, अहिले‌ यस विषयमा सर‌कार‌ र‌ निजी क्षे‌त्र आआफ्नै‌ धु्रवमा उभिएको‌ अवस्था हो‌ । तर‌, यो‌ समस्या समाधानको‌ लागि एक हप्ताभित्र प्रतिवे‌दन बुझाउने‌गर‌ी एउटा समिति बनिसके‌को‌ छ । जुन समितिले‌ वै‌ज्ञानिक आधार‌मा एउटा प्रतिवे‌दन बनाउने‌छ, जसले‌ पर्वतार‌ो‌हण शुल्कसम्बन्धी जुन समस्या उठिर‌हे‌को‌ छ, त्यसलाई समाधान गनेर्‌छ ।